IWCA ထူးချွန်ဆောင်းပါးဆု - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
အမည်စာရင်းများအတွက် ခေါ်ဆိုမှု- 2022 IWCA ထူးချွန်ဆောင်းပါးဆု
အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို ဇွန်လ 1 ရက်၊ 2022 နောက်ဆုံးထားရမည်ဖြစ်သည်။
IWCA ထူးချွန်ဆောင်းပါးဆုများကို နှစ်စဉ်ပေးအပ်ပြီး စာရေးဌာနလေ့လာမှုနယ်ပယ်အတွင်း သိသာထင်ရှားသောအလုပ်များကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ Writing Center အသိုင်းအဝိုင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များအား IWCA ထူးချွန်ဆောင်းပါးဆုအတွက် ဆောင်းပါးများ သို့မဟုတ် စာအုပ်အခန်းများကို အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အမည်စာရင်းတင်ထားသော ဆောင်းပါးကို ယခင်ပြက္ခဒိန်နှစ် (2021) အတွင်း ထုတ်ဝေရပါမည်။ တစ်ခုတည်းသော စာရေးဆရာနှင့် ပူးပေါင်းရေးသားထားသော လက်ရာများ နှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို၊ ပုံနှိပ် သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ပညာရှင်များက ဆုအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည်။ ကိုယ်တိုင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို လက်မခံပါ၊ နှင့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူတိုင်းသည် တစ်ဦးတည်းသာ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်သည်။ ဂျာနယ်များသည် ဆုပေးသည့်စက်ဝန်းတစ်ခုအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂျာနယ်မှ ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုသာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆိုပြုလွှာများအားလုံးကို တစ်ဆင့်ခံ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂူဂဲလ်ပုံစံ. အမည်စာရင်းတင်သွင်းရာတွင် အောက်ပါဆုသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပုံနှင့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည့် ဆောင်းပါး၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ္တူနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် စာလုံး 400 ထက်မပိုသော စာလုံး သို့မဟုတ် ကြေငြာချက်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးအားလုံးကို တူညီသောစံနှုန်းများဖြင့် အကဲဖြတ်ပါမည်။
ပညာသင်ဆုနှင့် စာရေးဌာနများတွင် သုတေသနပြုရန် သိသိသာသာ ပံ့ပိုးကူညီပါ။
သီအိုရီများ၊ အလေ့အထများ၊ မူဝါဒများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံများကို စာရေးစင်တာလုပ်ငန်းကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အတွေ့အကြုံများကို ဆွေးနွေးပါ။
အရေးအသားစင်တာများတည်ရှိပြီးလည်ပတ်နေသည့်တည်ရှိနေသောအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ စာနာမှုပြပါ။
အဆင့်တိုင်းရှိ စာရေးစင်တာမှ ပညာရှင်များနှင့် ကျင့်ထုံးသမားများသည် ၎င်းတို့အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော လက်ရာများကို အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ အနိုင်ရရှိသူအား ဗန်ကူးဗားရှိ 2022 IWCA ညီလာခံတွင် ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ (နှင့် Google ဖောင်ကို ဝင်ခွင့်မရသူများ) မှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို IWCA ဆုပေးပွဲ ပူးတွဲဥက္ကဌ Leigh Elion (lelion@emory.edu) နှင့် Rachel Azima (razima2@unl.edu).
2021: Maureen McBride နှင့် Molly Rntscher တို့ ဖြစ်သည်။. "ရည်ရွယ်ချက်၏အရေးကြီးပုံ- စာရေးစင်တာပညာရှင်များအတွက် လမ်းညွှန်ပေးခြင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။" Praxis: စာပေစင်တာဂျာနယ်၊ 17.3 (2020): 74-85။
2020: အလက်ဇန္ဒြီးယား Lockett“ ဘာကြောင့်ဒီကို Academic Ghetto လို့ခေါ်ကြလဲ၊ လူမျိုး၊ နေရာ၊ အရေးအသားစင်တာများကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း” Praxis: စာပေစင်တာဂျာနယ် 16.2 (2019) ။
2019: ဂီတ Denny“ နှုတ်ဖြင့်ရေးသားခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းနေရာ - စာပေစင်တာနှင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှု၏အသစ်သောနှင့်အဖြစ်များသောစည်းကမ်းချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 37.1 (2018): 35-66 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2018: ဆူး Mendelsohn, 'Raising Hell' - Jim Crow America ရှိစာတတ်မြောက်ရေးညွှန်ကြားချက် ' ကောလိပ်အင်္ဂလိပ် 80.1, 35-62 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2017: ရီလမ်“ ဆုံးဖြတ်ချက်များ…ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ စာပေပြုစုရေးစင်တာကိုမည်သူရွေးချယ်မည်နည်း” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 35.2 (2016): 141-171 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2016: ရေဗက္ကာ Nowacek နှင့် Bradley Hughes“ စာအရေးအသားစင်တာတွင်အကန့်အသတ်များရှိသောအယူအဆများ - အထိန်း၏ကျွမ်းကျင်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုငြမ်းခြင်း” တွင် ငါတို့သိသည့်အရာကိုအမည်ပေးခြင်း: သီအိုရီများ၊ အလေ့အကျင့်များနှင့်ပုံစံများ၊ Adler-Kastner & Wardle (eds) ။ Utah ပြည်နယ် UP, 2015 ပုံနှိပ်ပါ။
2015: ဂျွန် Nordlof, "Vygotsky, ငြမ်းနှင့်အရေးအသားစင်တာအလုပ်အတွက်သီအိုရီ၏အခန်းကဏ္,ကို" အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 34.1 (2014): 45-64 ။
2014: အန်း Ellen Geller နှင့် ဟယ်ရီ Denny၊ “ Ladybugs၊ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်းနှင့်အလုပ်ကိုချစ်ခြင်း - စာရေးခြင်းစင်တာမှပညာရှင်များသည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 33.1 (2013): 96-129 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2013: ဒါန Driscoll နှင့် ရှယ်ရီ Wynn Perdue“ သီအိုရီ၊ Lore နှင့်အခြားအရာများ - The Writing Center ဂျာနယ်၊ ၁၉၈၀-၂၀၀၉ တွင် RAD သုတေသနအားသုံးသပ်ခြင်း” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 32.1 (2012): 11-39 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2012: ရေဗက္ကာနေ့ Babcock“ ကောလိပ်အဆင့်နားမကြားသောကျောင်းသားများနှင့်စကားပြန်စာအရေးအသားစင်တာသင်ခန်းစာများ” ပညာရေးအတွက်ဘာသာဗေဒ 22.2 (2011): 95-117 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2011: Bradley Hughes, Paula Gillespieနှင့် ဟာဗေး Kail“ သူတို့ဘာတွေယူသလဲ။ Per Writing Tutor Alumni Research Project မှတွေ့ရှိချက်များ” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 30.2 (2010): 12-46 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2010: Isabelle Thompson က“ စာပေပြုစုရေးစင်တာတွင်ငြမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း - အတွေ့အကြုံရှိသောနည်းပြဆရာ၏နှုတ်ဖြင့်နှင့်နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သောကျူရှင်နည်းဗျူဟာများကို Microanalysis ပြုလုပ်သည်” အရေးအသားဆက်သွယ်ရေး 26.4 (2009): 417-53 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2009: အဲလစ်ဇဘက်အိပ်ချ် Bouquet နှင့် Neal Lerner“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 'အရေးအသားရေးစင်တာ၏အတွေးအမြင်' ပြီးနောက် " ကောလိပ်အင်္ဂလိပ် 71.2 (2008): 170-89 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2008: Renee ဘရောင်း, Brian Fallon, ဂျက်စီကာလတ်, အဲလစ်ဇဘက်မsဲနှင့် အဲလစ်ဇဘက် Mintie, "တူနီးရှားအပေါ်ယူခြင်း: အပြောင်းအလဲကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဆရာများ", အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 27.1 (2007): 7-28 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
မိုက်ကယ်မက်တီဆင်“ ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမည့်သူတစ် ဦး - စာအရေးအသားစင်တာတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်အာဏာရှိခြင်း” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 27.1 (2007): 29-51 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2007: Jo အမ်း Griffin, Daniel Keller, Iswari P. Pandey၊ အန်း - မာရီ Pedersenနှင့် Carolyn Skinner ၊“ ဒေသအလိုက်အလေ့အကျင့်၊ အမျိုးသားအကျိုးဆက်များ၊ စာပေစင်တာအားလေ့လာခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 26.2 (2006): 3-21 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
Bonnie Devet, Susan Orr၊ Margo Blythmanနှင့် စီလီယာဆရာတော်“ ရေကန်တစ်လျှောက်တွင် Peering - အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်တွင်အခြားကျောင်းသားများ၏အရေးအသားတိုးတက်စေရန်ကျောင်းသားများ၏အခန်းကဏ္။ ။ ” ယူကေရှိအဆင့်မြင့်ပညာရေး၌ပညာရေးဆိုင်ရာအရေးအသားသင်ကြားခြင်း - သီအိုရီများ၊ အလေ့အကျင့်များနှင့်ပုံစံများ, ed ။ Lisa ကို Ganobcsik-Williams ။ Houndmills, အင်္ဂလန်; နယူးယောက်: Palgrave MacMillan, 2006 ပုံနှိပ်ပါ။
2006: အန်း Ellen Geller, "Tick-Tock, Next: အရေးအသားစင်တာ၌ယုဂ်အချိန်ကိုရှာဖွေခြင်း" အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 25.1 (2005): 5-24 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2005: မာဂရက် Weaver“ ကျူရှင်ဆရာများ၏ 'အဝတ်အစားကဘာကိုပြောသလဲဆိုတာကိုဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း။ ပထမပြင်ဆင်ခြင်းအခွင့်အရေး / သင်ခန်းစာနေရာ၌ရေးသားခြင်း " အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 24.2 (2004): 19-36 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2004: Neal Lerner,“ စာပေပြုစုရေးစင်တာအကဲဖြတ်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ထိရောက်မှု၏ 'သက်သေ' ကိုရှာဖွေခြင်း။ Pemberton & Kinkead ၌တည်၏။ ပုံနှိပ်ပါ။
2003: ရှာရွန်သောမတ်စ်, ဂျူလီဘီဗင်နှင့် မာရိအမ်းခရော“ အစုစုစီမံကိန်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်များကိုမျှဝေခြင်း” Gillespie, Gill-am, Brown နှင့် Stay တို့တွင်။ ပုံနှိပ်ပါ။
2002: Valerie Balester နှင့် ဂျိမ်း C. မက်ဒေါ်နယ်“ အခြေအနေနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကိုကြည့်ခြင်း - စာရေးခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းစင်တာ၏ဒါရိုက်တာများကြားဆက်ဆံရေး” WPA - စာစီစာရိုက်အစီအစဉ်ကောင်စီ၏ဂျာနယ် 24.3 (2001): 59-82 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
2001: Neal Lerner“ ပထမဆုံးအကြိမ်စာရေးခြင်းဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ၀ န်ခံခြင်း” ရေးစင်တာဂျာနယ် 21.1 (2000): 29- 48 ပုံနှိပ်။
2000: အဲလစ်ဇဘက်အိပ်ချ် Boquet“ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်ချက်” - စာပေစင်တာသမိုင်း၊ အကြို ၀ င်ခွင့်မတိုင်မီ။ ကောလိပ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး 50.3 (1999): 463-82 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1999: Neal Lerner၊ “ လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ သင်ကြားရေးစက်များ၊ ပရိုဂရမ်ရေးသားထားသောစာသားများ - အရေးအသားစင်တာများတွင်သင်ကြားပို့ချသောနည်းပညာ၏မူလအစ။ ” Hobson ၌တည်၏။ ပုံနှိပ်ပါ။
1998: နန်စီ Maloney Grimm“ စာအရေးအသားစင်တာ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေအခန်းကဏ္: - အပြစ်မဲ့သောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာခြင်း။ ” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 17.1 (1996): 5-30 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1997: ပတေရုသ Carino, "ပွင့်လင်းဝန်ခံချက်နှင့်ရေးသားခြင်းစင်တာသမိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး: & Models သုံးပုံပြင်။ " အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 17.1 (1996): 30-49 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1996: ပတေရုသ Carino“ စာအရေးအသားစင်တာကိုလေ့လာခြင်း - မလွယ်ကူသည့်အလုပ်တစ်ခု။ ” တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး: ဖွဲ့စည်းမှုအထူးကုများအတွက်ဂျာနယ် 2.1 (1995): 23-37 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1995: ခရစ္စတီးနားမာဖီ“ စာအရေးအသားစင်တာနှင့်လူမှုဆောက်လုပ်ရေးသီအိုရီ။ ” Mullin & Wallace ၌တည်၏။ ပုံနှိပ်ပါ။
1994: မိုက်ကယ် Pemberton“ စာပေစင်တာကျင့် ၀ တ်ရေးရာ။ ” အတွက်အထူးကော်လံ Lab မှသတင်းလွှာရေးခြင်း 17.5, 17.7-10, 18.2, 18.4-7 (1993-94) ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1993: အန်နီပါဒို, '' လာနှင့်သွား၏တီးတိုး ': Fannie ထံမှသင်ခန်းစာများ။ " အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 12.2 (1992): 125-45 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
Meg Woolbright“ ကျူရှင်၏နိုင်ငံရေး။ ဖခင်အုပ်စိုးမှုအတွင်းအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ။ ” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 13.1 (1993): 16-31 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1992: အဲလစ်ဂဲလမ်၊ အရေးအသားစင်တာဂေဟဗေဒ - Bakhtinian အမြင်။ အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 11.2 (1991): 3-13 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
Muriel Harris က“ စာအရေးအသားစင်တာအုပ်ချုပ်ရေးတွင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အပေးအယူများ။ ” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 12.1 (1991): 63-80 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1991: Les Runciman ဖြစ်သည်“ မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးအဖြတ် - ကျွန်ုပ်တို့သည် 'နည်းပြဆရာ' ဟူသောစကားလုံးအမှန်ကိုအသုံးပြုလိုသလား။ ” \_ t အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 11.1 (1990): 27-35 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1990: Richard Behm“ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းကျူရှင်ခြင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြIssနာများ - ပူးပေါင်းလေ့လာခြင်း၏ကာကွယ်ရေး။ ” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 9.2 (1987): 3-15 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1989: Lisa ကို Ede“ လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ရေးသားခြင်း - စာရေးခြင်းစင်တာများအတွက်သီအိုရီအုတ်မြစ်။ ” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 9.2 (1989): 3-15 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1988: John Trimbur ပါ“ ရွယ်တူချင်းနည်းပြဆရာ - စည်းကမ်းချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းလား” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 7.2 (1987): 21-29 ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1987: အက်ဒွပ်လိုတို“ စာရေးသူ၏အကြောင်းအရာသည်စိတ်ကူးယဉ်တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်သည်။ ” အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 5.2 နှင့် 6.1 (1985): 15- 21. ပုံနှိပ်ပါ။
1985: စတီဖင်အမ်မြောက်အမေရိက, "စာအရေးအသားစင်တာ၏စိတ်ကူး။ " ကောလိပ်အင်္ဂလိပ် 46.5 (1984): 433-46 ။